AudioSourceRE Vocal Drum Bass & Software fanesorana fitaovana
"Fivarotana mahery vaika" Pro Sound News Mividy, manandrana na misoratra anarana
RePAN Plugin ho an'ny DAWs Asio feo amin'ny tena fotoana ao amin'ny DAW tianao indrindra Vidio na andramo izao
"DeMIX - manaitra mahery vaika product " Sound on Sound Hividy izao
SOFTWARE FANAMPOANA VOC-QUALITY avo lenta & fampitaovana
Mamorona STEM sy Karaoke mora foana sy haingana miaraka amin'ny AI mandroso indrindra demixteknolojia ing misy amin'ny tsena.
Algorithm fisarahana feo AI miaraka amina fitaovana fanovana spectral tsy manimba.
Esory ny vongana, ny amponga, ny bas ary ny zavamaneno hafa avy amin'ny loharano audio mifangaro!
Rindrambaiko malefaka sy mora entina manentana ny fanahy amin'ny olona rehetra eo amin'ny sehatry ny mozika na ny post-production.
Manambatra ny algorithman AI mitokana feo farany miaraka amina fanovana audio miorina amin'ny spectral. Manome feo professionals tsy manam-paharoa hery manala ny feo, amponga, bass ary zava-maneno avy ao anaty mix.
Ny bokotra 4 vaovao dia manasaraka ny feo, bass, drum ary taho hafa indray mandeha.
Bokotra "hafa" vaovao hanasarahana ireo zavamaneno natsangana, amin'ny fampiasana algorithm fisarahana vaovao.
Mifehy sy mitahiry fofonaina feo sy reverb miaraka amin'ny vavahady Vise Noise Gate.
Fisarahana am-peo tsara kokoa miaraka amin'ny tsy fanelingelenana firy amin'ireo loharano hafa amin'ny feonao misaraka
Fanetsehana fitaovana haingana sy tsotra kokoa process
Famandrihana tsy manam-petra
Miorina haingana sy azo antoka amin'ny rahona Profitsaharana
Manohana hatramin'ny 24bit 192kHz Audio
Algorithme mitokana AI mandroso sy ny fizotran'ny asa intuitive. Mora ny manala ny feon-kira, amponga, valiha ary zavamaneno. Mety ho an'ny DJ, producers, ary mpitendry mozika manao dian-tongotra, santionany na remix avy amin'ny raki-peo efa misy.
Asio fanetezana sy famerenam-bolo stereo amin'ny lalitra ity amin'ny fampiasana ny tena horonam-peo vita amin'ny horonam-peo vita amin'ny horonam-peo. Amboary ny sakany ary avereno ny fatran'ny fifangaroana efa misy ao anaty tena izy. Mifehy ny fomba tianao handrenesana ny mozika.
Plugin ho an'ny fisarahana amin'ny tena fotoana
Mifanaraka amin'ny DAW isan-karazany
Fisarahana ara-tsoroka tena miorina amin'ny vanim-potoana
Remix, fandanjalanjana ary avereno indray mandeha
Fisarahana fisarahana marobe mifototra amin'ny mpampiasa
Format Plugin VST, AU ary AAX
Pro Fampianarana audio
JEREO AUDIOSOURCERE INDRINDRA
Miaraka amin'ny Remix miaraka DeMIX Pro
Làlana mitokana tsy manam-petra sy fitaovana fanitsiana mahery vaika dia manome anao fanaraha-maso ireo singa tsy ankiato amin'ny fifangaroana audio. Avereno jerena ny toetoetra na ny toeran-dàlana misy ny lalana misaraka sy ny remix amin'ny fomba rehetra tianao!
Remix miaraka amin'ny DeMIX Essentials
Rehefa avy nanasaraka ny làlanao ianao dia mora ny manao remix haingana amin'ny fampiasana DeMIX Essentials. Ampiasao ny mixer mora ampiasaina hanovana ny habetsaky ny feo, amponga, bass, na zorony fanombohana na apetaho indray ny loharano amin'ny toerana hafa amin'ny sehatry ny stereo. Ny safidy dia anao!
Fisarahana fisarahana stereo tena miorina amin'ny vanim-potoana
Hisaraka sy hamerenana amin'ny laoniny tena izy RePAN, ny plugin fisarahana miorina amin'ny vilany izay manohana ny DAW lehibe rehetra. Hita amin'ny endrika AAX, VST, ary AU ho an'ny Mac sy Windows.
Midira ao amin'ny Newsletter
Araho izahay ao amin'ny Social Media